Kedu otu esi ahọrọ ngwaike ọnụ ụzọ? lee ebe a
Ọtụtụ ndị mmadụ na -enwe obi abụọ mgbe ha na -azụta na ịwụnye akụrụngwa ụlọ. Kedu otu m ga -ahọrọ iji dabaa nha nke ọma? N'ebe a, were sistemụ ngwaike alumini alloy nke Shandong Yuqiang mepụtara dịka ọmụmaatụ. Nyere gị aka ịza obi abụọ ndị a. Iwu nhazi ngwaahịa. ...
Ngwa sistemụ mmeghe ọkụ eletrik
Njirimara nke onye na-emepe windo yinye: 1. D-QDL ihe mmeghe windo bụ oghere mepere emepe, nke dị mfe ịwụnye; N'elu ngwaahịa a na -anabata usoro ịgba mmiri fluorocarbon, a na -abawanye ọkwa nchebe ka IP32, nke na -echebe gburugburu ebe ọrụ nke isi mot ...
Qinglianyuan Integrity Education Center nke Jinan Commission for Discipline Inspection-Yale Electric Opening System Project project
Jinan Qinglianyuan Integrity Education Center nwere mmekọ na Kọmitii Obodo nke Jinan maka Nnyocha ịdọ aka na ntị nke Kọmunist nke China. Ọ dị n'akụkụ ugwu nke mpaghara ọwụwa anyanwụ nke njem nlegharị anya North Road, Licheng District, Jinan City, n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Lianhuashan Heat S ...
Kedu ihe m ga -eme ma ọ bụrụ na agbachiri mkpọchi aka ahụ?
N'ime ndụ anyị kwa ụbọchị, ekwenyere m na ọtụtụ ndị mmadụ ezutewo na ire oblique rapaara ma ọ bụ enweghị ike ịgbaghari aka nke mkpọchi ụzọ. Ọ bụrụ na ị zute ụdị nsogbu a na mberede, ọ dị anyị mkpa ịmata kpọmkwem ihe kpatara enweghị ike mepee ya, wee depụta ọgwụ kwesịrị ekwesị ...
Teknụzụ nchekwa nwụnye nke ọnụ ụzọ aluminom na windo nkwadebe ụlọ
Nkwadebe nka Ọkwa na nha nke ọnụ ụzọ na oghere windo kwekọrọ na eserese ụlọ ahụ, ekwesịrị ime ka nkọwa teknụzụ dị ka ihe iwu chọrọ si dị. Nkwadebe ihe Nkọwapụta na ụdị nke ọnụ ụzọ aluminom na windo ...
Kedu ihe ị ga -elebara anya mgbe ị na -ahọrọ ọnụ ụzọ na windo profaịlụ aluminom?
A bịa na ọnụ ụzọ na windo alloy aluminom, ọtụtụ ndị enyi hụrụ ha n'anya ma kpọọ ha asị. Ihe ha hụrụ n'anya bụ ụdị dị mma ọ bụghị nkwarụ, na ihe ha kpọrọ asị bụ oghere windo rụrụ arụ. Karịsịa n'oge udu mmiri, a na -enwe oke mmiri ozuzo n'èzí na obere mmiri ozuzo n'ụlọ, oke ikuku na -abụghị ...
Kedu otu esi ahọrọ nha na ụdị hinges maka ọnụ ụzọ na windo?
Onye ọ bụla ghọtara ọrụ nke hinges. Dị ka otu akụkụ ngwaike, ọnụ ụzọ na windo enweghị ike ikewapụ ya na mgbakwunye maka iji ya eme ihe. E kwesịghị ileda obere ihe nkedo anya. Maka ọnụ ụzọ na windo nke nkọwa dị iche iche n'ụlọ, ị nweghị ike ịzụta naanị otu hinge. Ị kwesịrị ch ...
Uru dị n'iji windo agbagọ
1. Kwalite ịrụ ọrụ ikuku mgbe windo dara, ọ nwere ike ọ bụghị naanị ikuku nwere ike ime ụlọ ahụ, mana ihe kacha mkpa bụ na ikuku na -esi na windo na n'akụkụ abanye n'ime ụlọ, ọ gaghị afụkwa ahụ n'ahụ ozugbo. Karịsịa mgbe ọdịiche dị n'etiti ụlọ na ...
Yuqiang Hardware-2019 Zhengzhou Azụmaahịa Ihe Nrụpụta Ihe Mgbapụta kwụsịrị nke ọma
Site na Ọgọstụ 28th ruo 30th, 2019, 2019 Zhengzhou Commercial Information Construction Expo ka emere nke ọma na Zhengzhou International Convention and Exhibition Center. Ihe ngosi a na-akpọkọta ụdị ama ama ama nke ụdị dị iche iche na ụlọ ọrụ ihe ndozi ụlọ iji sonye ...
Ọnụ ụzọ ụlọ China Weifang nke 14, Window na Mkpuchi Mkpuchi emere nke ọma na 2019
A ga-eme ihe ngosi 2019 Weifang China, Window na Mkpuchi Mgbidi na Weifang Lutai Convention and Exhibition Center na Mee 16-18, 2019! N'afọ a, emeela ihe ngosi ahụ nke ọma na nnọkọ nke 14, nke China Building System Doors and Windows Alliance kwadoro, Quanlian Rea ...
Yuqiang kpughere ihe ngosi 22 na ọnụ ụzọ rọba rọba
On April 14, 2017, 22nd National Plastic ụzọ na Windows Industry Kwa Afọ Conference na Plastic ụzọ, Windows na yiri Ngwaahịa ngosi e ukwuu meghere na Xi'an Qujiang International Convention na ngosi Center. Ihe ngosi a bụ nke ndị C ...
Yuqiang na -ewepụta profaịlụ Aluminom Fujian nke igwe anaghị agba nchara na ngosipụta ụlọ ọrụ windo
Na Jenụwarị 17-19, nke Fujian Gumei Metal Co., Ltd. na-akwado, “2016 Profaịlụ Aluminom Fujian/Igwe anaghị agba nchara/ọnụ ụzọ na ihe ngosi ụlọ ọrụ windo” nke Qingdao Yuqiang Hardware CO., LTD rụchara nke ọma na Nan'an Ebe Ngosi Ihe Ngosi nke Mba Niile. ...